Visa to USA & Money Back Guarantee | Jobs - Career - Travel Book & Work!
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်း - Comma မှခွဲခြားထားသည် (မန်နေဂျာ၊ အရောင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ)
0CV ကို Upload လုပ်ပါ
ယူအက်စ်အေ & ငွေ Back ကိုအာမခံဖို့ဗီဇာ
သြဂုတ်လ 27, 2019
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမှအပို CV ကို Add
သြဂုတ်လ 28, 2019
ပထမဦးဆုံးအ 30 ရက်ပေါင်းအခမဲ့များမှာ!
သာ $ 1 / လများအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Start
ယူအက်စ်အေမှဗီဇာ, သင်ယခုအမေရိက၏ United States မှာအသစ်တခုဘဝအဘို့သင့်အခွင့်အလမ်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒီဝန်ဆောင်မှုဟာပါဝင်သည်အလုပ်လုပ်နှင့်အမေရိကန်တွင်နေထိုင်စတင်ရန်သင်ကူညီကြလိမ့်မည် 60 ရက်အတွင်းအလုပ် + ငွေ Back ကိုအာမခံ!။ ထို့အပြင်ဤဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ကောင်းလှ၏။
ယူအက်စ်အေ & ငွေ Back ကိုအာမခံအရေအတွက်မှဗီဇာ
60 ရက်အတွင်းတစ်ဦးကအလုပ် + ငွေ Back ကိုအာမခံ!
အမေရိကန်နိုင်ငံဖို့ဗီဇာ - ကျနော်တို့ကအမေရိကန်ကိုချစ်! သငျသညျကိုအံ့ဩနေကြတယ်လျှင်မည်သည့်လမ်းလည်းမရှိ တစ်ချိန်ကပေးဆပ် နှင့်ရ အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဗီဇာ + အလုပ် မပါဘဲ ပေးဆောင်ခြင်း အစဉ်အဆက်ကိုထပ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအလုပ်အကိုင်ဗီဇာသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဇာရဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြှင့်အကောင့်နှင့်အတူအမေရိကန်အတွက်အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သင်မြောက်အမေရိကသစ်ကိုစီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကျွန်တော်တစ်ဦး legit ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းမည်သို့သိနိုင်သလဲ အဆိုပါ .gov ကတာဝန်ရှိသူတဦးကဖွင့်ဆိုလိုသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့ဗီဇာရဖို့သင်ကူညီအနည်းငယ်အစိုးရများနှင့်အဘယ်သူအားမျှအစိုးရများဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ထို့အပြင်မကြာခဏ .gov သို့မဟုတ် .mil အတွက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများကဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သေချာသင်တစ်ဦးဖက်ဒရယ်အစိုးရ site ပေါ်တွင်ရောက်နေပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအသက်တာသစ်စွန့်စားမှု၏ဤခက်ခဲလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ပံ့နေသည်။
အမေရိက၏ United States ကိုတစ်ဗီဇာရယူပါ!
Access ကိုဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီပရီမီယံဗီဇာအကောင့်ကိုသင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသူတို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗီဇာရရှိရန်နှင့်အာရုံကိုဖမ်းကူညီဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိတစ်အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဘဝအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စံပြအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူ, ထို့အပြင်အမေရိကန်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်အမေရိကန်အတွက်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက် ကေနဒါ။ ကျနော်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုဗီဇာပံ့ပိုးပေးကြသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဦးတည်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် မြောက်အမေရိက ခရီး !. ပြည်တော်ပြန်သန်းပေါင်းများစွာပြီးသားနယူးယောက်စီးတီးနှင့် Los Angeles မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ အမေရိကားဗီဇာတစ်ခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းကြိုတင်နေရာယူ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အလုပ်၏ကျန်လုပ်ပေး !.
"ယူအက်စ်အေ & ငွေ Back ကိုအာမခံဖို့ဗီဇာ" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
သငျသညျဖွစျရမညျ အတွက် logged ပြန်လည်သုံးသပ် post ရန်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျအံ့သြဖွယ်ရာအရပျမှဗီဇာ။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထံမှဗီဇာနှင့်အတူရှိရနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရရှိပါသည်။ မှားယွင်းတဲ့ဗီဇာပေးသူအဘို့သင့်အချိန်ဖြုန်းနဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်အသုံးမပြုပါ !. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့သင်ဟာသင့်အရမ်းချစ်? အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ, သင်ရနိုင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သစ်တစ်ခုဘဝ! သငျသညျကိုအံ့ဩနေကြတယ်ဆိုပါကမည်သည့်လမ်းလည်းမရှိ တစ်အားလပ်ရက်အပေါ်ယူအေအီးရသို့မဟုတ်ပင် working အချိန်ပြည့်။ get တစ်ဦး သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဗီဇာ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကူဝိတ်မှဗီဇာ။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထံမှဗီဇာစနစ်ဖြင့်ရှိရနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရရှိပါသည် !. ယခုကြှနျုပျတို့ကျွမ်းကျင်သူများကူဝိတ်မှရွှေ့ဖို့ကူညီနေတာပါ။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကူဝိတ်နဲ့သင်ဟာသင့်အရမ်းချစ်? ကူဝိတ်၌, သင့်ကိုယ်သင်နေတဲ့အသက်တာသစ်ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ် !. သငျသညျမွငျ့မားပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များရှာနေလျှင်ဒါ, ဒီတိုင်းပြည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။
အခုဆိုရင်: အသစ်ကနယူးဇီလန်မှဗီဇာ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနယူးဇီလန်ဖို့ဗီဇာရဖို့ကူညီပေးနေ !. အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သငျသညျယခုနယူးဇီလန်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအာမခံနှင့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့ 60 ရက်အတွင်း + ငွေ Back ကိုအာမခံအလုပ်ရကြလိမ့်မည် !. နယူးဇီလန်အတွက်ဗီဇာနှင့်အလုပ် - သင်ကအော့ကလန်, Wellington, ခအတွက်တစ်ဦးအသက်တာသစ်နှင့်အလုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။